6 calaamad oo cusub ayaa lagu daray tirada calaamadaha cudurka COVID19 | Somali Health
Home Warar 6 calaamad oo cusub ayaa lagu daray tirada calaamadaha cudurka COVID19
6 calaamad oo cusub ayaa lagu daray tirada calaamadaha cudurka COVID19
Xarunta ka hortaga cudurada faafa ee Mareekanka (CDC) ayaa tirada calaamadaha cudurka COVID19 waxay ku dareen lix (6) astaamo oo cusub. Calaamadaha cusub ayaa ka kala ah; Qarqariyo, jareys, murqo xanuun, madax xanuun, cune xanuun iyo uriska iyo dhadhanka oo dhuma. Arrintaan ayaa ka dambeysay kadib markii khubarada caafimaadku sheegeen in cudurka COVID19 u weeraro xubno badan oo jirka ka mid ah.
Billowgi hore, khubarada caafimaadka waxay soo jeediyeen in cudurka COVID19 uu waxyeeleeyo habdhiska neef-mareenka, halka bukaannada uu ku dhaco ey ka soo muuqdaan calaamaadaha caanka ku yihiin cabuqyada ku dhaco neef-marenka. Sidaas darteed, hey’adda caafimaadka adduunka, Xarunta ka hortaga cudurada faafa ee Mareekanka iyo hey’adda caafimaadka dadweynaha UK waxay isku raaceen in calaamadaha cudurka COVID19 yihiin; neefsashada adkaato, qufac iyo qandho.
Kal hore ayey aheyd markii dhakhaatiirta la tacaalesay daaweynta bukaannada la xaqiijiyey ee qabay cudurka COVID-19 waxa ay soo gudbiyeen in dareenka uriska iyo dhadhanka oo dhuma ey ku arkeen bukaanno badan oo ay daaweynayeen. Sidaas si la mid ah, ururka ee ku midaysanyihin dhakhaatiirta Cunaha, Sanka iyo Dhagaha ee Mareekanka iyo dhiggooda dalka Ingriiris oo ka hadlay arintaan ayaa soo jeediyey in uriska iyo dhadhanka oo dhuma loo aqoonsado mid ka mid ah calaamadaha looga shakin karo jiritaanka cudurka COVID-19.
Cudurka COVID-19, waa mid ka mid ah cudurada la is qaadsiiyo ama faafa, Cudurkan ayaa horraantii bishii Disember 2019 ka dillaacay magaalada Wuhan, gobolka Hubei ee dalka Shiinaha. Calaamadaha ugu caansan ee cudurka COVID-19 waa qandho, qufac, neefsashada adkaato iyo urta iyo dhadhanka dhuma.
Previous articleSidee COVID-19 Dadka U Dilaa?
Next article[Faallo] Cudurka Covid-19 oo cashar CIRBO qaadasho ah u dhigay madaxda qaaradda Afrika